7 Fitsangatsanganana an-tongotra tsara indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Fitsangatsanganana an-tongotra tsara indrindra any Eropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 15/11/2020)
Betsaka ireo boky torolàlana misy torohevitra sy tolo-kevitra momba ny karazana dia any Eropa, sy ny karazana fitsangatsanganana rehetra. Ireto boky torolalana ireto dia tsara hianarana momba ny tantara sy ny kolontsaina, fa tsy hilaza aminao ny momba ny toro-hevitra ao anatiny any Eropa izy ireo. Ny fitsangatsanganana an-tongotra an-tongotra dia fomba mahafinaritra hahitana an'i Eropa, ary ho hitanao ny fitsangatsanganana an-tanàna mandehandeha any amin'ny tanàna eropeana rehetra.
Manaova kiraro ahazoana aina, satria handeha amin'ny dia mankany amin'ny 7 fitsangatsanganana an-tongotra tsara indrindra any Eropa.
1. Fitsidihana an-tongotra an-tongotra tsara indrindra any Prague
Hihaona aminao ny mpitari-dalana miteny anglisy Trano fandraisam-bahiny mananasy ao amin'ny tanàna taloha ho an'ny 2.5 ora’ fitsangatsanganana an-tongotra manodidina an'i Prague. Hanomboka ny fitsangatsanganana an-tongotra ao amin'ny kianja Old Town malaza ianao, manohy mankany amin'ny Charles Bridge malaza. Avy amin'ny ivon'ny mpizahatany mankany amin'ny toerana tsara indrindra an-tanàna ho an'ny sakafo atoandro sy zava-pisotro, Prague's do's and not's, hamita ny dia amin'ny tolo-kevitra sy tantara an-taonina izay tsy mbola novakinao tao amin'ny boky torolalana ianao.
Ny fitsangatsanganana an-tanàn-dehibe any Prague dia iray amin'ireo 7 fitsangatsanganana an-tongotra tsara indrindra any Eropa, noho ny mpitari-dalana manokana. Handao ny fitsangatsanganana faly ianao hahita an'i Prague, ary miaraka amin'ny lisitr'ireo trano fisakafoanana tsara izay manome menus fisakafoanana mora vidy. Ankoatry ny, ianao dia hianatra momba ny fitsangatsanganana ho an'ny labiera labiera tsara indrindra any Czech, ary ny fomba fijery tsara indrindra an'i Prague manaitra.
Fitsangatsanganana an-tongotra malalaka any Amsterdam, fantatra ihany koa amin'ny fitsangatsanganana an-tanànan'ny FreeDam, dia ny fahitana sy fankafizana ny tanàna malala-tanana indrindra any Eropa. Miala isan'andro ny fizahan-tany amin'ny toeram-pivoriana ao amin'ny Stock Exchange mandritra ny 3 ora fitsangatsanganana, manomboka amin'ny angano Old Amsterdam ka hatramin'ny tantaran'ny Amsterdam maoderina sy lamaody.
Nandritra ireo 3 ora mahafinaritra, hihaona amin'ireo mpandeha eran'izao tontolo izao ianao ary hianatra momba ny politikam-panafody liberaly any Amsterdam, distrika jiro mena, politika, ary ny tantara avy amin'ireo mpitari-dalana’ tantara mahatsikaiky. Ankoatry ny, amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra maimaimpoana, afaka mahazo toro-hevitra avy ao anaty ianao avy amin'ny torolàlana fitsangatsanganana an-andro tsara indrindra avy any Amsterdam ary manerana an'i Eoropa.
3. Fitsangatsanganana an-tongotra an-tanàna tsara indrindra any Berlin
Fitsidihana an-tongotra an-tongotra an-tongotra voalohany tany Berlin no fomba tsara indrindra hahitana ny tantaran'ny tanàna, mari-toerana, ary misongadina ao anatin'ny adiny roa. Fitsidihana an-tongotra fampidirana tsara ho an'ny iray amin'ireo tanàna be hipopotama indrindra any Alemana, miaraka amin'ny tantara manankarena, and politics.
Ho fanampin'ny fanasongadinana manan-tantara, Berlin dia manolotra fitsangatsanganana samihafa izay hampiseho an'i Berlin amin'ny lafiny maro; kanto, tendan-kanina, na zava-pisotro’ mifantoka. amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra an-tanàn-dehibe any Berlin, hitsidika ianao 6 amin'ireo mari-pamantarana lehibe any Berlin, ary henoy ny momba ny tantara ao ambadiky ny rindrin'ny Berlin sy ny kolontsainy.
Ny fitsangantsanganana an-tongotra an-tongotra tany Berlin tany am-boalohany dia miala indroa isan'andro, avy amin'ny teboka fivoriana amin'ny “Ilay Bud”. Ny mpitari-dalana dia hiandry amin'ny t-shirt fitsangantsanganana an-tongotra voalohany any Berlin ary ho faly hanome soso-kevitra amin'ny toerana fety tsara indrindra eto an-tanàna, ary ahoana no fitsangatsanganana avy any Berlin mankany amin'ireo tanàna lehibe hafa any Alemana ary tahiry nasionaly.
Venise dia iray amin'ireo tanàna kely indrindra any Italia. Na izany aza, mora be ny very rehefa mandehandeha eny amin'ny arabe tery ianao ary mahatalanjona trano. Ny fitsangatsanganana an-tanàna an-tanàna malalaka any Venise dia hitarika anao amin'ny tantara, kolontsaina, kanto, sy ny maritrano a 2.5 fitsidihana ora maro. Ny mpitari-dalana be fitiavana Simona dia hilaza aminao momba ny tanàna rehetra, nahandro, sy toerana ho an'ny tantaram-pitiavana.
Ny fisongadinan'ny fitsangatsanganana an-tongotra malalaka an'i Venise dia i Simona, ny mpitari-dalana, sy ny rivo-piainana mahafinaritra. Na inona na inona orana, ny isan'ny olona, hanana fotoana mahafinaritra ianao ary hahazo tolo-kevitra marobe Sakafo italiana ary zava-pisotro Eprol any Venise.
5. Fitsangatsanganana an-tongotra an-tanàna tsara indrindra any Paris
I Paris no iray amin'ireo tanàna mpizahatany indrindra any Eropa, tsy lazaina intsony eto amin'izao tontolo izao. Rehefa feno ny mpizahatany ny Tilikambo Eiffel sy ny Avenue des Champs-Elysees, sarotra ny mankafy ny majika amin'ireo tranonkala malaza ao an-tanàna. fa, mitsangatsangana an-tongotra maimaimpoana, ny mpitari-dalana anao dia ho azo antoka fa hahazo ny tsara indrindra amin'ireo mari-toerana ireo ianao, ary maro hafa amin'ny fitsangantsanganana tsy manam-paharoa.
Paris dia tranon'ny vatosoa miafina maro, noho izany ny isan'ny fitsangatsanganana an-tongotra maimaimpoana dia tsy misy farany. Misy fitsangatsanganana andro aman'alina, fitsangatsanganana isaky ny faritra, fitsangatsanganana an-tsakafo sy zavakanto. Na izany aza, ny fitsangantsanganana an-tongotra an-tanàna tsara indrindra any Paris dia ny vatosoa miafina ary fitsangatsanganana miafina any Paris. Ny mpitari-dalana dia hitondra anao hamaky ny andalana miafina ao Louvre, tranobe mankamin'ny sary miafina, lavitra ny vahoaka ary mankamin'ny fon'ireo Parisien.
Ho fanampin'ilay torolàlana mahafinaritra sy mahafinaritra, Ny fitsangatsanganana an-tanàna tsara indrindra any Zurich dia ny lanitra fahandro. Maninona no mamakivaky ny tanàna taloha ary manasongadina an'i Zurich amin'ny fomba nentim-paharazana, rehefa afaka manatsatoka azy amin'ny sôkôla soisa masina ianao. Manandrana truffles, mianatra momba ny fitrandrahana kakao ary tsidiho ny sôkôlazy tsara indrindra any Eropa rehefa mankafy ny fiangonana Lindenhof sy Grossmunster ianao.
Zurich dia fitsangantsanganana an-tongotra maimaimpoana dia 2 ora lava ary miainga isaky ny asabotsy avy any Paradeplatz, ary tsy ilaina ny misoratra anarana.
Lugano mankany Zurich Train Prices
7. Vienna, Aotrisy
Ny fomba tsara indrindra hanombohana mamangy an'i Wina dia ao amin'ny fitsidihana fitsidihana an-tanana tanàna malalaka any Vienna. Eo ho eo 2 ora maromaro dia hahazoanao tantara fohy momba an'i Wina sy ireo mari-pamantarana lehibe, izay ahafahanao manandrana sakafo Viennese hisakafo atoandro avy any Marina, iray amin'ireo mpitari-dalana tsara indrindra any Wina.
In-droa isan'andro, ny mpitari-dalana dia miandry anao ao amin'ny kianja Albertina hanao fitsangatsanganana manan-tantara manodidina an'i Vienna.
Ny zavatra tsara indrindra momba ny fitsangatsanganana an-tongotra dia ny torolàlana. Raha ny ankamaroan'ny dia dia amin'ny anglisy, ny mpitari-dalana dia hanolotra izay ilainao ho fantatra momba ny tanàna amin'ny teny anglisy tena tsara. Ny fanontaniana rehetra dia ho voavaly ary hamarana ny fitsangatsanganana amin'ny tolo-kevitra mahagaga ianao, tantara nifanesy, ary fampahalalana momba ny tanàna. Ny zavatra faharoa tsara indrindra dia ny 7 fitsangantsanganana an-tanàna tsara indrindra any Eropa, afaka ve izy ireo, fohy ary hatramin'ny teboka, ary manintona.
Fitsangantsanganana an-tanàn-dehibe an-tongotra an-tongotra any Eropa FAQs
Maimaimpoana tokoa ve ireo fitsangatsanganana an-tongotra an-tongotra ireo?
Ny fitsangatsanganana an-tanàna an-tongotra maimaimpoana dia mifototra amin'ny tendrony. Meaning, tsy mila mamandrika toerana amin'ny fitsangatsanganana ianao handoavana vola, fa amin'ny faran'ny fitsidihana, tokony hisaoranao ilay mpitari-dalana lehibe amin'ny alàlan'ny fanoratana.
Ohatrinona no ilaiko manome toro-hevitra?
Miovaova ny tendrony isaky ny tanàna, fa ny salan'isa ny tendrony dia € 5 ka hatramin'ny € 15.
Ahoana no ahitako ny toro-lalana?
Ireo mpitari-dia amin'ny fitsangatsanganana an-tanàna maimaimpoana dia hihaona aminao amin'ny teboka fivoriana afovoany, ary ho hitanao amin'ny akanjon'izy ireo izy ireo. Ankoatry ny, azo inoana fa ho avy izy ireo hiarahaba anao.
Misy fitsangatsanganana an-tongotra amin'ny fiteny hafa ankoatry ny Anglisy?
Ny ankamaroan'ny fitsangatsanganana an-tongotra maimaim-poana any Eropa dia manome fitsangatsanganana amin'ny teny Anglisy sy ny fiteny eo an-toerana, miaraka amin'ny fitsidihana vitsivitsy amin'ny fiteny hafa. Tsy mitovy amin'ny tanàna isan-tanàna izany, sy ny mpandraharaha fizahan-tany.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao handamina ny dianao mankany amin'ireo tanàna eropeana tsara indrindra sy fitsangantsanganana an-tongotra amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “7 fitsangantsanganana an-tongotra maimaimpoana tsara indrindra tsara indrindra any Eropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / zh-CN ny / en na / de kokoa fiteny.